Uwazi Kanjani Amakhasimende Akho E-B2B Ngokufunda Ngomshini | Martech Zone
Amafemu we-B2C athathwa njengabagijimi abaphambili ezinhlelweni zokuhlaziya amakhasimende. Iziteshi ezahlukahlukene ezinjenge-e-commerce, imithombo yezokuxhumana, kanye nezentengiselwano ezihamba phambili zinikeze amandla lawo mabhizinisi ukuqopha ukumaketha nokunikeza izinsizakalo ezinhle kakhulu zamakhasimende. Ikakhulukazi, idatha ebanzi kanye nezibalo ezithuthukisiwe ngezinqubo zokufunda ngomshini zinike amandla osomaqhinga be-B2C ukubona kangcono ukuziphatha kwabathengi nemisebenzi yabo ngokusebenzisa amasistimu aku-inthanethi.
Ukufunda ngomshini nakho kunikeza amandla avelayo okuthola ukuqonda kumakhasimende ebhizinisi. Kodwa-ke, ukwamukelwa amafemu we-B2B kusamele kuqale. Yize ukuthandwa okwandayo kokufunda komshini, kusenokudideka okuningi maqondana nokuthi kungena kanjani ngaphakathi kokuqonda kwamanje kwe- Insizakalo yamakhasimende e-B2B. Ngakho-ke ake sikucacise lokho namuhla.
Ukufunda Komshini Ukuqonda Amaphethini Ezenzweni Zamakhasimende
Siyazi ukuthi ukufunda ngomshini kumane kuyisigaba sama-algorithms enzelwe ukulingisa ubuhlakani bethu ngaphandle kwemiyalo ecacile. Futhi, le ndlela isondele kakhulu ekutheni siwabona kanjani amaphethini nokuhlangana okusizungezile futhi sifinyelela ekuqondeni okuphezulu.
Imisebenzi yokuqonda yendabuko ye-B2B igxile emininingwaneni enqunyelwe njengosayizi wenkampani, imali engenayo, imali efakiwe noma abasebenzi, futhi uhlobo lomkhakha oluhlukaniswe ngamakhodi we-SIC. Kepha, ithuluzi lokufunda lomshini elihlelwe kahle likusiza ukuthi uhlukanise amakhasimende ngokukhaliphile ngokususelwa kulwazi lwesikhathi sangempela.
Ikhomba imininingwane efanele mayelana nezidingo zamakhasimende, izimo zengqondo, okuthandwa nguwe, kanye nokuziphatha maqondana nemikhiqizo noma izinsizakalo zakho futhi isebenzisa le mininingwane ukwenza ngcono ukumaketha kwamanje nezenzo zokuthengisa.
Ukufundwa Komshini Wokwahlukaniswa Kwemininingwane Yamakhasimende
Ngokusebenzisa ukufundwa komshini kuyo yonke idatha yamakhasimende esiyiqoqayo ngezenzo zabo ngamawebhusayithi ethu, abathengisi bangaphatha ngokushesha futhi baqonde umjikelezo wempilo womthengi, imakethe ngesikhathi sangempela, athuthukise izinhlelo zokwethembeka, akhe ukuxhumana okwenzelwe wena nokufanele, athole amaklayenti amasha futhi gcina amakhasimende abalulekile isikhathi eside.
Ukufundwa komshini kunika amandla ukuhlukaniswa okuthuthukile kubalulekile ekwenzeni ngezifiso komuntu ngamunye. Isibonelo, uma inkampani yakho ye-B2B inomgomo we ukucwenga isipiliyoni samakhasimende futhi kuqinise ukubaluleka kokuxhumana ngakunye, ukuhlukaniswa okuqondile kwedatha yamakhasimende kungabamba ukhiye.
Kodwa-ke, ukuze lokhu kwenzeke, udinga ukugcina i-database eyodwa, ehlanzekile yokufunda komshini okungasebenza kuyo ngaphandle kwenkinga. Ngakho-ke, uma usunawo amarekhodi ahlanzekile anjalo, ungasebenzisa ukufunda komshini ukuhlukanisa amakhasimende ngokuya ngemfanelo enikezwe ngezansi:
Izidingo / izimfanelo ezisuselwa kumkhiqizo
Ukufunda Komshini Ukuncoma Amasu Okususelwa Kumathrendi
Lapho usuhlukanise imininingwane yamakhasimende, kufanele ukwazi ukunquma ukuthi wenzeni ngokuya ngale datha. Nasi isibonelo:
Uma izinkulungwane zeminyaka e-US zivakashela isitolo se-inthanethi, ziphenqa iphakethe ukubheka inani likashukela kwilebuli yokudla okunempilo, futhi zihambe ngaphandle kokuthenga, ukufunda ngomshini kungakubona ukuthambekela okunjalo futhi kukhombe wonke amakhasimende enza lezi zenzo. Abakhangisi bangafunda kuleyo nkathi yesikhathi sangempela futhi benze ngokuvumelana nakho.
Ukufunda Komshini Ukudiliva Okuqukethwe Okufanele Kumakhasimende
Phambilini, ukumaketha kumakhasimende we-B2B bekubandakanya ukukhiqiza okuqukethwe okuthatha imininingwane yabo yemisebenzi yokukhangisa yangakusasa. Isibonelo, ukucela ukuhola ukugcwalisa ifomu ukulanda i-E-book ekhethekile noma ucele noma iyiphi idemo yomkhiqizo.
Yize okuqukethwe okunjalo kungabamba imikhondo, izivakashi eziningi zamawebhusayithi ziyanqikaza ukwabelana ngama-ID noma izinombolo zefoni zazo ze-imeyili ukuze nje zibuke okuqukethwe. Ngokusho kwe- okutholwe ucwaningo lwe-The Manifest, U-81% wabantu ushiye ifomu eliku-inthanethi ngenkathi uyigcwalisa. Ngakho-ke, akuyona indlela eqinisekisiwe yokukhiqiza imikhondo.
Ukufunda ngomshini kuvumela abathengisi be-B2B ukuthi bathole imikhondo esezingeni eliphezulu evela kuwebhusayithi ngaphandle kokubadinga ukuthi bagcwalise amafomu okubhalisa. Isibonelo, inkampani ye-B2B ingasebenzisa ukufundwa komshini ukuhlaziya isimilo sewebhusayithi yesihambeli futhi yethule okuqukethwe okuthokozisayo ngendlela eqondene nomuntu uqobo ngesikhathi esifanele ngokuzenzekelayo.
Amakhasimende e-B2B adla okuqukethwe hhayi nje ngokususelwa kuzidingo zokuthenga kepha futhi nephuzu abakulo ohambweni lokuthenga. Ngakho-ke, ukwethula okuqukethwe ezindaweni ezithile zokuxhumana zomthengi nokuqhathanisa izidingo zabo ngesikhathi sangempela kuzokusiza ukuthi uthole inani eliphakeme lemikhombandlela ngesikhathi esifushane.
Ukufunda Komshini Ukugxila Ekuzisebenzeleni Kwamakhasimende
Ukuzisebenzela kubhekiswa lapho isivakashi / ikhasimende lithola ukusekelwa
Ngaleso sizathu, izinhlangano eziningi zikhulise iminikelo yazo yokuzenzela ukuletha umuzwa ongcono wamakhasimende. Ukuzenzela insizakalo kuyinto ejwayelekile yokusetshenziswa kwezicelo zokufunda ngomshini. Ama-Chatbots, abasizi be-virtual, namanye amathuluzi athuthukisiwe we-AI angafunda futhi alingise ukusebenzisana njenge-ejenti yesevisi yamakhasimende.
Izicelo zokuzenzela zona zifunde kokuhlangenwe nakho okwedlule nokuxhumana ukwenza imisebenzi eyinkimbinkimbi ngokuhamba kwesikhathi. Lawa mathuluzi angavela ekwenzeni ukuxhumana okubalulekile nabavakashi bewebhusayithi ukukhulisa ukuxhumana kwabo, njengokuthola ukuhlangana phakathi kwendaba nesixazululo sayo.
Ngaphezu kwalokho, amanye amathuluzi asebenzisa ukufunda okujulile ukwenza ngcono ngokuqhubekayo, okuholela ekusizeni okunembile kubasebenzisi.
Akukhona lokhu kuphela, ukufunda ngomshini kunezinye izinhlelo zokusebenza ezahlukahlukene. Kubakhangisi, kungukhiye ofanele wokufunda izingxenye zamakhasimende eziyinkimbinkimbi futhi ezibalulekile, indlela abaziphatha ngayo nokuthi bangaxhumana kanjani namakhasimende ngendlela efanele. Ngokukusiza uqonde izici ezahlukahlukene zekhasimende, ubuchwepheshe bokufunda umshini ngokungangabazeki bungathatha inkampani yakho ye-B2B iye empumelelweni engenakuqhathaniswa.
Tags: b2binsizakalo yamakhasimende e-b2bisenzo samakhasimendeukuziphatha kwamakhasimendei-database yamakhasimendeImininingwane yamakhasimendeumjikelezo wempilo yamakhasimendeinani lamakhasimendeukufunda okujulileukufunda imishiniinhlolovo ebonakalayoezokuzisizaamakhodi we-sicabasizi abangokoqobo